Iyo itsva iPad Pro ine 3D kamera inogona kuwanikwa munaKurume | IPhone nhau
Iyo kugadzirwa kweiyo nyowani iPad Pro ingadai yave kutoenderera sekutsanangurwa kubva pakati DigiTimes, saka tinogona kuenderera mberi nerunyerekupe runonongedzera zvakananga kune yakakosha Kurume, kunyanya iyo Chipiri 31st yemwedzi unouya.
Zvingave here kuti Apple yakatangisa iyo nyowani iPad Pro mune ino yakakosha? Zvakanaka, zvinoenderana nezvavanotsanangura mukati DigiTimes izvi zvichave saizvozvo. Makamera eiyo nyowani iPhone 11 Pro anogona kuve protagonists mune ino nyowani iPad Pro uye izvi zvinosvika ne iyo itsva iPhone 9 iyo inofanirwa kuve neyakafanana dhizaini seiyo iPhone 8 ikozvino asi nekuvandudza kwemukati maererano neprosesa.
Chinhu chikuru chinogona kuve nezvakawanda zvitsva maficha uye iyo Pro Pro inogona kunge iri yavo
Iyo sensor yeToF yaizoitwa mune ino inofungidzirwa nyowani iPad Pro, iyo inozobatsira kwazvo kuyera madaro kana kuyera zvinhu. Ichokwadi ndechekuti zvese zvinoratidza kuti iyi nyowani iPad Pro ichave neyakafanana dhizaini yazvino modhi, iine USB C chiteshi yakaitwa uye inofungidzirwa nekuvandudzwa kweprosesa pamwe nekuvandudzwa kwemakamera.
Iyo iPad Pro yanga isina kuchinjika kubva 2018 uye kuvandudzwa kunotarisirwa munguva pfupi. MuDigiTimes ivo vanotsanangura kuti uyu modhi unenge uri gumi nemaviri masendimita uye ivo havaite chero chirevo kune zviyero zvazvino asi zvinokwanisika kuti iko kwakanyanya kukanganisa mune zvinyorwa kubvira parizvino mamodheru ari gumi nerimwe uye 11 mainji zvakateedzana, tinopokana kuti aya masikirini anochinja. Zvinotarisirwa kuti kugadzirwa kweiyi nyowani iPad Pro hakusi sezvaitarisirwa nekuda kwenyaya dzatotaurwa pamusoro apa, iyo coronavirus yaizokanganisa kugadzirwa kwemidziyo iyi kunyangwe paine kutaura nezve mayuniti emamirioni matatu pamwedzi, tichaona zvinopedzisira zvaitika it. Izvo zvinoita sezviri pachena ndezvekuti isu tinogona kuve neiyo nyowani iPad Pro mune rinopfuura chete mwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Iyo itsva iPad Pro ine 3D kamera inogona kuwanikwa munaKurume
Samsung AirDrop inobvumira kugovana zvemukati pamwe neanosvika mashanu zvishandiso panguva imwe chete